Lungiselela ama-sleigh, noma kunalokho - i-wardrobe ekwindla nangobusika ehlobo - leli qiniso elincane liye lafundwa ngabadwebi befashini, futhi seluvele linikeza umbono wabo wezicathulo ezifashini ekwindla-ebusika 2016-2017. I-sock evulekile, isithende esingavamile, izintambo eziningi namabhakede amakhulu - lokho kuluhlu oluphelele lwalokho abagibeli bezimoto abazimisele ukumangaza ibutho lempi labalandeli.
Izindwangu zamantombazane eziphathekayo ekwindla-ebusika 2016-2017: izithombe zezinhlobonhlobo eziqhakazile
Ake siqale ngeqiniso lokuthi amamodeli ekwindla nobusika ayamangaza ngokuvuleka kwawo, futhi ngomqondo wangempela wezwi. Futhi uma ungenayo izicathulo zasebusika ezinezwane ezivulekile ezambatho zakho, khona-ke kudingeka nje ukuthenga eyodwa. Kungakhathaliseki ukuthi isihloko sokufudumala kwembulunga yonke sithinte izingqondo zokudala zabaqambi, noma ukuqala kokubanjwa kwababhali bezingqola zezinyawo kudala ekwakhiweni kwekwindla-ebusika 2016-2017 kuye kwadlala indima, kepha iqiniso lihlala: izicathulo ezivulekile zisezingeni elihle kakhulu sezulu elibandayo elizayo ... Vumela futhi hhayi okwenzayo ngempela. Kodwa "izingubo zemilenze" ezivela eRodarte, eStella McCartney, Prada, 3.1 Phillip Lim nabanye - ngokuqinisekile zizobona izungeze.
Ah, yebo! Ukuhleka okhethekile futhi kuwumkhuba "wezicathulo eziqinile"! Futhi makube kanye kuphela amantombazane avela esifundazweni esikude ayejwayele ukuhamba, namuhla kunemfashini futhi isitayela! Nakuba ... lo mkhuba usengumamateur.
Izicathulo ezinzima ezinamabhakede amakhulu kanye ne-trekta kuphela zilula, zisebenzayo futhi "zithinta izwe" - ezibaluleke ngokukhethekile emifanekisweni yezulu lekwindla. Futhi, ngokungafani nomkhuba odlule, ukubiza izicathulo ulimi lwabesifazane ngeke luphenduke, kodwa ngokuthembeka kwabo futhi "ukwandisa ikhono lokuwela izwe" ngokuqinisekile akungabazeki! Ngisho nezindlu ezivamile ezihlanjululwayo nezindawo ezithandekayo ze-Burberry ne-Mulberry, le mkhuba yawela ukunambitha.
I-sock ebukhali isasebenza. Futhi, hhayi kuphela izicathulo zakudala, kodwa futhi ngokuziqhayisa, ama-moccasins, izitolo zokudla nezicathulo "intombi ka-cowboy". Lo mkhuba ngokuvamile awulimazi, kodwa kuphela kubanikazi bomlenze omncane. Kodwa abesifazane besimfashini abanesisindo esingama-40 nangaphezulu - kubalulekile ukuba uqaphele, ukuze unyawo lungaguquki phakathi kwe-skis kanye nemigqomo. UNarcisoRodriguez, uJeremyScott nabanye baveza ukuhluka kwabo ngesihloko sesinyosi esicacile.
Izicathulo zesitayela samadoda zisashandwa. Esikhathini esizayo, kufanele uqaphele amamodeli aseGucci, Celine, Balenciaga, Georgio Armani, Rag neT Bone. Lawa ma-chelseks, abahlukumezi, ama-loafers kanye nama-sneakers ngokuqinisekile bayowuthola ukuzwelana kwamantombazane amaningi ukuthi afuna ukuba "ngendlela evamile". Ukugqoka amamodeli afanayo kunconywa ngobumnene, ama-feminine ensembles. Umdlalo wezinto ezifaniyo uyindlela yokuwina ngokuphumelela kwesisombululo esinjalo.
Izicathulo zabesifazane abakhuthele ekwindla-ebusika 2016-2017: izithombe ezivela emibonisweni (isithombe 68)
Ngakho-ke kusuka kulokho okwenziwe izicathulo ezisezingeni eliphezulu kakhulu ekwindla-ebusika 2016-2017? Izithombe ezisuka kumbukiso zibukeka zibonisa uthando lwabaqambi ngalezi zinto noma lokho. "Inombolo eyodwa" isalokhu isikhumba. I-soft, ewusizo futhi ehluke kakhulu-ukudala kuyo kuyinjabulo! Lokhu kuvame ukuqiniseka abaqondisi bokudala bezindlu zemifashini Fendi, NinaRicci, HugoBoss, OpeningCeremony.
I-Suede yinye isitayela esidumile esingakaze silahlekelwe isikhundla sayo iminyaka eminingi. U-Alberta Ferretti, u-Trussardi, uRalph Lauren nabanye abaningi baye bawazisa zonke izinzuzo zezinhlobo ezivela kulolu hlobo olunomusa wesikhumba. Manje kuya kwabesifazane besimo!
I-Velvet iyinto ehloniphekile futhi iphelele. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi akuyona inkathi yokuqala elandelanayo ukuthi ama-couturiers aboncekile e-velvet hhayi izingubo kuphela, kodwa futhi nezicathulo . U-Valentino, u-Dries van Noten wadala izibonelo zezingubo zezinyawo, izicathulo nezicathulo ezinezinwele ezithambile ezenziwe ngendwangu enkulu kakhulu.
Izinhlanzi ze-sequin kanye ne-marabou - izakhi ezinjalo ezingalindelekile ziye zaba ukuhlobisa kwangempela kwendimba yonke yezinwele zezifashini, izicathulo, amabhuzu, ekwindla-ebusika 2016-2017. Yiqiniso, kwakukhona i-glare ekuqoqweni abathandi abadumile be-Dolce ne-Gabbana ekhanyayo futhi ehlakaniphile. Bajoyine uLowewe noMichael Kors.
Izimpaphe zezinyoni eziyingqayizivele - ukuhlobisa kubaluleke kakhulu, okungenakwenzeka ukuhlobisa izicathulo zansuku zonke zezicathulo ezithandayo noma amabhuzu. Kodwa izicathulo "endleleni yokuphuma" - lokhu kuzoba yisinqumo esingavamile nesithakazelisayo sokwakha. Ikakhulukazi le mkhuba yayikwazi ukufanekisa umkhiqizo wemfashini uChristopher Kane, lapho ngisho nezintambo "zaziphumula".
Izicathulo zabesifazane abasebenzisa imfashini ngezintende futhi ngaphandle kwezithende, ekwindla-ebusika 2016-2017, isithombe
Izitshudeni ezithandwa kakhulu futhi ezithandwa kakhulu ngaphandle kwesithende nangenkathi ezayo ekwindla-ebusika yizo ze-chelsea, izicathulo kanye nokushintshashintsha kwesihloko sezicathulo zezemidlalo. Okuhle, okusebenzayo futhi okuzenzekelayo kakhulu.
Ngokuhlukile kufanelekile ukuphawula amamodeli kwisitayela samadoda, lapho, kusobala, akukho isithende akufanele. Lezi zicathulo eziqinile nezihle kakhulu zifanelana nemicibisholo yebhizinisi kanye nezingubo zokugqoka zakudala.
Ama-slippers amnandi ayizibonelo lapho uzizwa khona ekhaya yonke indawo. Mhlawumbe, ngakho-ke abakhiqizi bacabanga, ukudala umthamo wokwindla nobusika ongajwayelekile wango-2016-2017 wezindlu zemifashini iMuMiu neGucci.
Kodwa ama-model on the isithende amangaze ngempela ngokushintshashintsha kwawo. Lapha une isithende sendawo, ne-classic hairpin, ne-fantasy designer geometric, nokuningi okuningi. Gxila esithendeni esinqume ukwenza uDries van Noten, Marni, Versace, Miu Miu, JWAnderson.
Kungenjalo, njengejometri elijabulisayo futhi awukwazi ukubiza izithende ezivela kuSalvatore Ferragamo. U-Giorgio Armani omkhulu wase-Italy wanquma ukuletha amamodeli akhe i-dropuristic drop, edala izithende ezingavamile emasikweni angcono kakhulu esizayo.
Ezingxenyeni zezinyosi nangezikhumba ezithendeni, lokhu kugcinwa yizivakashi ze-Maiyet, uHugoBoss, uValtoino.
Isiteji + sesithende - ingxube yokugwedla! Noma kunjalo, abalandeli bokudalwa okudakayo kukaMary Katrantzou, u-Alexander McQueen, Maison Margiela sebeye bawazisa ukuqoqwa kwezicathulo ezintsha zalezi mikhiqizo evelele. Futhi futhi akavumeli ukuhamba ngomzwelo we-vuja deja ... Konke lokhu kubonakala sengathi kuye kwasondela kithi ngqo kusukela kuma-70s ekhulu leminyaka elidlule.
Izicathulo zesilisa ezithatha imfashini ekwindla-ebusika 2016-2017
I-Rivets - inkokhelo yesitayela sedwala - kule nkathi yemfashini ayethulwa nje kuphela njengento edingekayo yezicathulo ezinamafutha, kodwa futhi njengento yokuhlobisa ama-classic braids ekucingeni. Futhi yini? - Kwabonakala kungavamile futhi kuyisitayela! Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukugqoka izicathulo ezinjalo ngezikhwama zebhizinisi zakudala, futhi ngezingubo ezingavumelekile "kažl". U-Gucci no-Valentino banamandla okuzama ukuhlobisa izsimbi emaqoqweni abo okugcina ekwindla nobusika.
Izicathulo zamadoda ezimfashini zonyaka ekwindla-ebusika 2016-2017 futhi ngaphandle kwamamodeli emanzini aminyene, ayengafaneleki. Vumelanisa, umkhuba owusizo kakhulu ebanda kuqala! ULouis Vuitton, uLunvin, uVersace wabethulela izicathulo zabo zonke izikhathi (nanoma yisiphi isimo sezulu noma isimo sezulu esibi).
Imibala ekhanyayo ayinto engavamile, kodwa isitayela se- "vitamin" sezulu esibi. Futhi yikuphi okunye okukwazi ukuphumelela ngendlela ephumelelayo ekukhuliseni imizwelo ezinsukwini ezimpunga, ezinyakatho, zekwindla, njengephalethi enelanga?
Izicathulo ezifashisayo zentsha ekwindla-ebusika 2016-2017
Wena nabalingiswa bakho abathandayo bekhathuni - lezi zikhumba zizohambisana nanoma yimuphi intombazane. Zijabulise, zangempela futhi zibabaze ngokuphelele! Ingabe lesi siqubulo sabasha? Sineqiniso ngokuphelele ukuthi izicathulo ezifashisayo zentsha ekwindla-ebusika 2016-2017 kufanele zibukeke njengezibonelo ezivela kuqoqo le-amateur lonke Jeremy Scott elikhanyayo, elesabekayo nelingavamile. Qaphela izinkinobho ze-cowboy ngezingcaphuno ezibucayi kanye namamodeli agqamile, lapho ungaya khona esikoleni - ngenjabulo!
Ama-boot Fur - okungenani ku-tundra iya, ngisho nase-ski resort ehloniphekile ... Futhi usengakwazi ukuhlobisa ngokuphumelelayo ezinqabeni ezinjalo ezingavamile emigwaqweni ye-alma mater yakho yomdabu. Ezinsukwini ezibandayo zasebusika, lokhu akuyona nje enye into ephathekayo, kodwa futhi kuyinto ewusizo kakhulu, egqoke ukuthi akukho frost enonya.
Ijaji ethandekayo ekwindla nasebusika 2017-2018: izibonelo ezinhle kakhulu ngesithombe
«Emuva ku ...»: inkathi yokuthambekela ye-retro ekwindla-ebusika 2015-2016
Izikhwama ze-jeans ngezandla zabo
Indlela yokusiza ingane uma isebenzisa izidakamizwa
Iphayi elivuliwe ngejamu
Kwenzekani emzimbeni wesifazane ngesikhathi sokukhulelwa?
I-palette ye-makeup yokubonga ye-autumn ekuqoqweni kwe-Chanel
Ukuhlobisa izitsha ezimnandi
Uhlobo luni lwezipho ozenzile uKhisimusi?
Ukushada ngokusebenzisa inhlangano yomshado